Duufaanta Ceramic ee Shiinaha oo saf ugu jirtay warshadaynta Macdanta iyo alaab-qeybiyeyaasha. YUNFENG
Duufaan Ceramic ayaa safafka ugu jirta Macdanta
Qaybaha dhoobada ee qaabab kala duwan oo loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha * Faa'iidooyinka: xirashada iska caabinta, u adkaysiga saamaynta, dhismaha ku habboon, iwm, waxqabadkeeda aragti-isku-celiska ah waxay u dhigantaa 260 jeer oo bir bir ah, birta birta ah, 170 jeer. Si wax ku ool ah u dheereyn kartaa nolosha adeegga ee xirashada qaybaha. * Qaaday aagga arjiga: Meelaha laga codsado: Saliida, macdanta, mashiinnada birta, dhirta korantada iyo warshadaha kale dusha sare ee qalabka ama qalabka gudbinaya l ...
Qaybaha dhoobada ee qaabab kala duwan oo loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
* Faa'iidooyinka: xirashada iska-caabbinta, saamaynta u adkaysata, dhismaha ku habboon, iwm, waxqabadkeeda aragtiyeed ee iska caabbinta waxay u dhigantaa 260 jeer oo bir bir ah, birta chrome, 170 jeer. Si wax ku ool ah u dheereyn kartaa nolosha adeegga ee xirashada qaybaha.
Isku-dhafka adag ee dhoobada iyo dabacsanaanta sare ee birta ayaa siisa biibiile astaamo aan la garan karin oo ah xoqid adkaysi u leh, kuleylka u adkaysta iyo daxalka u adkaysta alaabada u adeegsiga beeraha tamarta, metallurgy, macdanta, iyo warshadaha kiimikada iwm. Faa'iidooyinka ka sarreeya tuubooyinka birta, tuubooyinka dhagxaanta dhagxaanta, iyo tuubooyinka isku dhafan ee bir-caag ah.
Muuqaalka tuubada lakabka dhoobada alumina:
Iska caabbinta sare
1. Caabbinta dhoobada dhoobada ayaa ka badan 10 jeer birta.
2. Lakab aad u qaro weyn oo lakabka u adkaysta dharka. (Marka loo eego shuruudaha isticmaalaha kororka ama yaraynta lakabka 6mm-9mm)
Daadinta laba-laabka ah
1. Adeegsiga dusiyeyaasha ka-hortagga daadinta, dusiyeyaasha u dhexeeya qaab-dhismeedka cadaadiska waa saddex dhinac oo is-riixmay.
2. Dhuumaha hareeraha ku yaal waxay leeyihiin 4-6 god adag oo fur ah, dhex gasho dusha sare ee godka qaab-dhismeedka koorta u qaabeysan, oo ku wada laasan derbiga bannaanka ee biibiile bir ah.
Miisaanka khafiifka ah:
Dhuumaha dhoobada dhoobada ka samaysan ayaa ka fudud taangiyada aaladaha, tuubooyinka birta lagu tuuro iyo tuubooyinka dhagaxa la tuuro taas oo yareyneysa kharashka gaadiidka isla markaana ka dhigaysa tuubooyinka mid si sahlan loo rakibayo
Rakibaadda ku habboon
Dhuumaha isku dhafan ee dhoobada dhoobada ah ee dhoobada dhoobada ah ayaa si fudud loogu xiri karaa alxanka ama leh flanges iyo isku xirayaasha jilicsan ee fudud.
Cabir 1200 (L) * 1000 (W) * 800 (D)
Xirmada caadiga ah waa sanduuq alwaax ah (Cabbirka: L * W * H). Haddii loo dhoofiyo wadamada yurub, sanduuqa alwaaxa ayaa fumigated.Haddii weelka uu aad u adag yahay, waxaan u adeegsan doonnaa filimka pe for packing ama ku xirxiran sida macaamiisha ay u codsadeen qaaska.
Cabir 1200 (L) * 1000 (W) * 800 (H)
Miisaanka .21.2 T
Hore: Rubber safka isku dhafan ee dhoobada leh alumina dhoobada dhoobada iyo caag dabiici ah
Xiga: 95% Alumina dahaarka dhoobada & dhuumaha birta oo si toos ah looga sameeyo warshada Shiinaha